Umuntu namuhla ichitha isikhathi esiningi isikhathi sakhe beshayela. Kwenzeka ukuthi Ngeke uhlale njalo endaweni ethile ukuze udedele futhi athole ingcosana ngakho. Ukuze uxazulule le nkinga, abakhiqizi ikhaya lisebenze ziye zasungula imoto Thermomug ukufuthelana.
Kuyini Thermomug yezimoto
Le divayisi ikuvumela ukuba wenze noma yisiphi isiphuzo esishisayo emotweni. Kubonakala sengathi i-abavamile mug lensimbi kancane yayizovela. Leli fomu ikuvumela ukubeka Thermomug elakhiwa ngo inkomishi umnikazi. Nokho, kuzonisiza bona ngokuphephile ayekuso, futhi umshayeli kungenzeka kudingeke ukuba sikhathazeke ngokuthi isiphuzo esishisayo liyochitheka.
Thermocup has a isibambo elula kanye ikhava hermetic. Okungukuthi, kungenzeka nje kuphela ukubilisa amanzi, kodwa futhi isikhathi eside ukugcina isiphuzo efudumele. Lolu hlobo thermos ukufuthelana.
Izithuthi Thermomug inikwa amandla yi-ugwayi ukuxegiselwa. Ngesikhathi esifanayo energy ukusetshenziswa nokubilisa nokushisa nokugcinwa abangelutho.
Yini engase ukwenziwa Thermomug
Muva nje, idivayisi ethandwa kakhulu ngokunembile imoto Thermomug phakathi abashayeli. Umsebenzisi Izibuyekezo uqinisekise ukusebenziseka zale divayisi. Ngokusho abathengi, Thermomug kumane Irreplaceable isizini ekwindla-ubusika. Ngakho, umshayeli kungaba ngomzuzwana esikhululekile ukwenza ikhofi noma itiye nokudla. Kuyinto elula kakhulu ngoba ayinayo kudingeka afune zinsiza noma amathilomu, lapho ungakwazi ukuthenga isiphuzo esishisayo.
Ukuze abazali abasha abachitha isikhathi esiningi beshayela, kubuye elula kakhulu Thermomug imoto. Izibuyekezo omama uthinte Ukusebenziseka zale divayisi. Ngakho, abazali abasebasha nganoma yisiphi isikhathi kungaba ubilise amanzi ukuba alulaze ingxube kanye ukupheka incumbe ubisi. Ngenxa Thermomug lula kakhulu ukondla ingane ngesikhathi evakashele isikhathi eside.
Ulungiselela iziphuzo ezishisayo futhi amamiksi - hhayi kuphela lula okuyiwona uthenge Thermomug. Umsebenzisi Izibuyekezo lokhu okusungulile ibonisa ukuthi abantu abaningi ukuyisebenzisa yenza noodle osheshayo noma isobho osheshayo. Ngakho, Thermocup yezimoto ivumela nje kuphela ukuxoxa kubanda, kodwa futhi ukudla isidlo esishisayo.
Futhi-ke, usebenzisa Thermomug, kubalulekile ukuba singakhohlwa ubuyise amasheya ushukela, ikhofi, itiye kanye namanzi.
Ukupheka ashisayo isiphuzo umshini, udinga uthele Thermomug isilinganiso esifanele amanzi, eduze uvalwe futhi uxhumeke ugwayi ukuxegiselwa. Ngokuvamile, ikhebula okokufaka itholakala ngaphansi isibambo zedivayisi. Ngemva kwemizuzu engaba ngu-10 amanzi kumbuthano iba hot. Kuleli qophelo, ungakwazi ushukela, ikhofi noma itiye.
Ithuba isikhathi eside ukugcina isiphuzo efudumele - esibalulekile, ngenxa okuyinto zenani Thermomug. Abashayeli lezivakashi kukhona iwubufakazi balokho. Ngakho, phakathi kohambo lwakho, awukwazi asheshise baphuze itiye hot noma ikhofi e sips amancane lapho ukuma ngesikhathi amarobhothi.
Kubalulekile wazi ukuthi konke ziphephile imoto ngci izinkomishi. Ngakho, ukuze ugweme inethiwekhi ukuminyana Ukushisa indlela engalethi amanzi ukuze ngamathumba. Fluid kuphela sishisiswe degrees ayisikhombisa.
Namuhla, yezimoto izinkomishi ukushisa namakhaza ukhiqiza izinkampani eziningi ezahlukene. Ziyahlukahluka kuye ngokubukeka, izinto zokwakha kanye nezindleko. Kakhulu eliphezulu futhi stylish phakathi abathengi kubhekwe Thermomug Contigo. Izibuyekezo ukugcizelela wentengo okungabizi.
imibuthano American Contigo zihluke analogue nezinye brand owaziwa design esiyingqayizivele. Ngakho, umenzi iveza ngemibala ehlukene. Ngakho-ke, umshayeli Ungakhetha Thermomug ukuthi ngeke ngokuphelele ukufanisa ngemoto yakhe. Zonke amakilabhu yalesi brand kwenziwa high izinto kahle ukumelana ukushisa.
Contigo ngci izinkomishi double-ngodonga insimbi engagqwali. Le ndlela yokwakha yenza eside ukushisa USB. Ngaphezu kwalokho, amaqembu anemisila esizenzekelayo esikhiyayo uhlelo. Okungukuthi, uketshezi ageleza kuphela ngokucindezela inkinobho ekhethekile. Lolu hlelo zivikela amathonsi ngephutha isiphuzo esishisayo.
Ngaphandle ukubukeka elikhanyayo lendebe has a lot of ezinye izinzuzo:
ukwahlukanisa okuhle, okuvumela ukuba ugcine lokushisa ketshezi hot 4 namakhaza - amahora angu-12;
ikhono lokusebenzisa hhayi kuphela emotweni, kodwa futhi ehhovisi, emgwaqeni, ejimini, ngemvelo;
ifomu elula, ngawo mug ukhululekile ukubamba ngezandla zabo;
Ukuphepha - esinye sezici ezibaluleke kakhulu ukuthi ukuhlukanisa Thermomug Contigo. Izibuyekezo wabanikazi lo mugqa imikhiqizo abonisa ukuthi bakuqonda lula ukusetshenziswa kuvulwa ngokuzenzekelayo emgodini. Nale design Thermomug ingasetshenziswa emhlabeni izingane, imibhalo kanye nempahla.
Yalutho, kodwa hhayi okungenani, izinga ngci izinkomishi akhiqizwa ngaphansi kwegama lomkhiqizo Bergner. Banesimiso design ezithakazelisayo futhi ayatholakala ngemibala ehlukene. Ngokuqondene ukwakhiwa, izinkomishi ngci Bergner ugcine kahle izinga lokushisa iziphuzo ashisayo nabandayo. umzimba wabo ezenziwe ngensimbi engagqwali, abicah ifaka kulekelelwa.
izinga Ukusebenziseka futhi eziphansi - nemingcele ezifana has Thermocup Bergner. Umsebenzisi Izibuyekezo ukugcizelela imikhiqizo Ergonomics. Ngakho, isivalo kuvula kalula, futhi akudingi mzamo owengeziwe, njengoba kunjalo nge thermos. Umshayeli kungavula indebe ngesandla esisodwa. Ngisho ngenkathi ushayela ungakwazi uphuze ikhofi ngokusebenzisa ukuvulwa okhethekile.
Izibuyekezo Jikelele mayelana Thermomug
Imibono mayelana imoto termokruzhek ezahlukene. Iningi lawo abantu okuhle. Abashayeli waqinisekisa Ukusebenziseka zale divayisi futhi ulisebenzise cishe nsuku zonke. Kodwa kunabantu abasendleleni Zama lokuqala akusebenzanga Thermomug kusukela usikilidi ukuxegiselwa. Uphenyo uhlelo negative ezihlobene esikuthandayo futhi abanye kwezingqinamba. Ngokusho la abasebenzisi engcona ukuba ikhofi phisa noma itiye ekhaya abaziphethe endaweni thermos evamile. Ngaphezu kwalokho, akubona bonke abantu abanomqondo isineke sokulinda kuze amanzi heats. Lona ethile kuphela, okuyinto has Thermomug.
Izibuyekezo futhi zithinta lokunyenti, ngabe tinkomishi fragility we abanye abakhiqizi. Labo ukuthenga amamodeli eshibhe babewasebenzisa impela kancane. Ngokushesha yephuka. Indlela engcono is ezibizayo uphawu Thermocup. Izibuyekezo wabanikazi abakhiqizi emhlabeni odumile amadivayisi omuhle kuphela. Inkinga kuphela, ngezinye izikhathi ababhekana nazo - isidingo ubuyisela ikhava noma ukuvulwa kudivayisi.
Akubambeki for aquarium. umklamo aquarium
Ozishintshayo ummese: izinhlobo, abakhiqizi
Amahora NaviForce - ukuthembeka kanye nesitayela
Lapho zokhuni ikhula kanjani? Incazelo, zinhlobo ukwehluka
Thola ml eziningi kanjani ingilazi, yiziphi izibuko
"Sikalfat" (ukhilimu): isimangaliso French
"Tamer tamer": abalingisi namaqiniso athakazelisayo
Ucingo LG G3: izici kanye nokubuyekeza
I-Nyakatfo Melika: sezulu esihlukahlukene nezici zabo